उकालो लाग्दा – Page 11 – Kanak Mani Dixit
किन उठेन आन्दोलन ?
हिमाल खबरपत्रिका (२४-३० वैशाख, २०७४) बाट विधि बिग्रेको मुलुकमा न अमनचयन हुन्छ न त प्रगति । आम नागरिकले राजनीतिक सन्तुष्टि/असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आवधिक निर्वाचनद्वारा हो । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छनोटको बेला राम्रोले इनाम र नराम्रोले दण्ड पाउँछन् । तर लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व छ भने मात्र यो सिद्धान्त काम लाग्छ । नत्र त, समाज निर्वाचित अधिनायकवादको पासोमा
हिमाल खबरपत्रिका (१७-२३ वैशाख, २०७४) बाट पहिला पनि तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो, अब तिब्बत–चीनसँग। अमेरिकी पत्रकारितामा ‘पिभट्’ शब्द राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा चलनचल्तीमा आयो। यूरोपलाई प्रथम ध्यान दिने अमेरिकी परराष्ट्रनीति एशिया महाद्वीपको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै एशियाकेन्द्रित हुने घोषणा भयो। त्यसलाई भनियो– परराष्ट्र नीतिको दिशा परिवर्तन गर्ने ‘पिभट्’। आज नेपाली अर्थ–राजनीति र भूराजनीति पनि ‘पिभट्’
हिमाल खबरपत्रिका (१०-१६ वैशाख, २०७४) बाट महिलाको स्वतन्त्र निजी ‘स्पेस’ को निर्माण अभियान सार्वजनिक यातायातबाट शुरु गरौं । मुलुकका महिला यतिविघ्न सार्वजनिक थलोमा एक्लै हिंड्ने चलन यसअघि थिएन । पूजाआजा, मेलापात, जात्रा र पर्वका बेला महिला घर बाहिर त निस्कने नै भए, तर एक्लै होइन; परिवार, साथी–सँगिनीको साथमा । सबै समुदायका महिला घरभित्रै गुम्सिएर गृहस्थी
हिमाल खबरपत्रिका (३-९ वैशाख, २०७४) बाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले घुमाउरो पाराले नभई सीधै गणतन्त्र स्वीकारेको देखाएका छन् । नेपालको संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा फेरबदल ‘इपोकल’ थियोे– युगान्तकारी । नेपाल निर्माण गर्ने वंशको १२औं पुस्ताका राजाले आफ्नै हातबाट राजसंस्था गुमाए । जनआन्दोलन २०६२–६३ को प्रमुख माग गणतन्त्र थिएन; तर हठ, दम्भ र मूर्खताका कारण ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक अवस्था
हिमाल खबरपत्रिका (२७ चैत, २०७३-२ वैशाख, २०७४) बाट त्यो बेला, जब ‘प्रगतिशील’ भनेको कुनै समुदाय चिनाउने नाम होइन, विशेषण थियो। करीब ४० वर्ष अगाडि मैले कलानाथ अधिकारीका रेकर्ड भएका प्रायः गीतहरू सुन्ने मौका पाएँ, र यी शोधकर्ता–गायक–अभियन्ता विस्मृतिमा जानु भनेको समाजले आफूमाथि अन्याय गरेको ठानें। ‘राइजिङ नेपाल’ अंग्रेजी दैनिकमा लेखें लेख, ‘द एक्लिप्स् अफ कलानाथ’–
हिमाल खबरपत्रिका (२०-२६ चैत, २०७३) बाट कतिपय ‘टाइटल’ आफूले आफैंलाई कहलाउनु हुँदैन। ‘म बौद्धिक’ अथवा ‘म विद्वान’ भन्नु, तत्व नभएर सारमा मात्र ध्यान पुग्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति हुन्छ। ‘उहाँ/तपाईं बौद्धिक हुनुहुन्छ’ भन्नु र ‘म बौद्धिक हुँ’ भन्नुमा कालो–सेतोको फरक छ। यस्तै को, कहिले ‘राजनीतिज्ञ’ हुन्छन् भन्ने हो। आजसम्म परामर्शदाता, जागीरे या प्राध्यापक भएकाले नयाँ राजनीतिक दलको
हिमाल खबरपत्रिका (१३-१९ चैत, २०७३) बाट दुर्घटना हुन्छ । रुखबाट घाँस झार्दा कोही भुईंमा बजारिन्छ, कोही गाडीको ठक्करले मोटरसाइकलबाट सडकमा लड्छ । हाम्रो प्रतिक्रिया के हुन्छ ? लम्पसार घाइतेतर्फ बढ्छौं, ट्याक्सी अथवा कुनै उपलब्ध वाहनलाई रोक्छौं र अस्पताल दौडाउने जमर्को गर्छौं । सहृदयी नागरिकले गर्नुपर्ने यही हो, तर त्यो गर्दागर्दै अक्सर हामी ठूलो गल्ती गरिरहेका
हिमाल खबरपत्रिका (६-१२ चैत, २०७३) बाट विजयकुमार पाण्डेको पुस्तक ‘खुसी’ (फाइन प्रिन्ट, २०७१) र यस स्तम्भको शीर्षकमा फरक के छ भने यहाँ विस्मयादिबोधक छ, उता छैन । मोटो ‘श’ र पातलो ‘स’ को कुरा पनि छ । अनि अर्थ के लाग्छ भने विजयकुमारलाई भन्दा उत्साह र हर्ष जगाउने विषयले यो पंक्तिकारलाई छोएछ । के हो
मरण र शोकको मूल्य
हिमाल खबरपत्रिका (२९फागुन-५चैत माघ, २०७३) बाट कसैको निधन हुँदा कति छिटो र स्वचालित भई हामी अंग्रेजीमा तीन अक्षर लेखिदिन्छौं— RIP ‘रेस्ट इन पीस’ । एकातर्फ आफन्त भर्खरै बितेकाको क्लोज अप् तस्वीर सेयर गरिहाल्छन् भने अर्कातर्फ संसारले लेखिदिन्छ– RIP । यसरी, परिवारदेखि नातेदार र चिनारुसम्मबाट मरणको अवमूल्यन हुँदैछ, मानव उत्पत्तिदेखिको त्रासदीमा अन्तर्मनको विह्वलता र चित्कार घट्दो छ ।
हिमाल खबरपत्रिका (२२-२८ फागुन, २०७३) बाट भूकम्पपीडित जनता तेस्रो वर्षे मनसुनमा पनि अस्थायी टहरा र त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । पुनःनिर्माणमा जनताको जीवन, जीविका र घरटहराको काम अलपत्र छ । तर नागरिक मात्र होइन, देवदेवीको पनि यस्तै बेहाल छ । महाभूकम्पको बेला छिमेक र दूरदराजका पीडितलाई जोगाउन जसरी सर्वसाधारण लागिपरे, त्यसरी नै मठ, मन्दिर, स्तूप